कस्तो अचम्म ! मानिसले झै चराले ठाडो घाँटी पारेर कुल्ला गरेको भिडियो भाइरल – Life Nepali
कस्तो अचम्म ! मानिसले झै चराले ठाडो घाँटी पारेर कुल्ला गरेको भिडियो भाइरल
काठमाडौँ । कहिलेकाहीँ जनावर र पशुपंक्षीले देखाउने ब्यबहार दुरुस्तै मिल्न जान्छन् । जनावर र पंक्षीले दुरुस्तै मानिसको जस्तो दृश्य देखाउँदा कस्लाई पो हाँसो उट्ठैन र ? यस्तै दृश्य अहिले ट्वीटरमा भाइरल बनिरहेको छ ।
जहाँ एउटा चराको भिडियो अहिले निकै चर्चामा छ । केवल १० सेकेण्डको यस भिडियो झट्ट हेर्दा कुल्ला गरगल गरे जसरी कुल्ला गरिरहेको देख्न सकिन्छ । भाइरल भिडियोमा चरा टाउको मास्तिर फर्काएर मानिसले कुल्ला गरे झै कुल्ला गरेको जस्तो देखिन्छ ।
यो भिडियो ट्विटर प्रयोगकर्तामाझ निकै चर्चामा छ । उनीहरूले चराको समझदारीलाई सकारात्मक प्रतिक्रिया दिँदै बुद्धिमानी चरा समेत भन्न भ्याएका छन् । चराको यो रमाइलो दृश्य देखेर तपाईको पनि हाँसो थामिने छैन ।https://youtu.be/5mJNo4a-Ywc
Previous रौतहटमा प्रहरी र स्थानियबीच झ’डप, डीएपीसहित ७ प्रहरी घा,इते
Next राइटे बस्तीमा अन्य व्यक्ति जान रोक